Umbhali nezwe odumile "Vasiliya Terkina" imbongi Soviet Aleksandr Trifonovich Tvardovsky wayengumuntu ofana nami. Wahlupheka izimpikiswano ezifanayo nalezo ngamunye wethu, kodwa esihlukile ikhono abanye zokugqokisa ku amazwi lokho abaningi abazi ukusiveza. ukuhlaziywa Simple we "iphuzu wonke ngesivumelwano olulodwa" - inkondlo miniature - ikubonisa.
amaqiniso Okubalulekile oluchaza
Abazali imbongi wahlala epulazini e-Smolensk esifundeni, amadlozi ku uhlangothi lukanina ukuvikela emdeni isimo Russian. Uyisemkhulu kwakungu isosha, uyise wakwazi uthole kanzima ekwakheni semali ekulindeleke ukuba sithengisise itulo ezincane sezwe epulazini lakhiwa. Ukuzalwa imbongi babe ngo-1910. Phambili kwaba revolution kwezenhlalo, owokuQala Umhlaba futhi kulwiwa.
Ngokusobala, ukuphila emhlabeni, umsebenzi ovuzayo wanikwa imbongi nokuqonda okucacile ukuphila, inkimbinkimbi okhazimulayo isitayela uthando kazwelonke. Wayengumuntu kuyafana izigidi zabantu abakhuluma isiRashiya. Nguye okhuluma ngabo bonke. Ukuhlaziywa "Lonke iphuzu esivumelwaneni olulodwa" kusho ukuthi wonke umuntu - yonke eyingqayizivele. Wonke umuntu lokuphatselene nalakufundze emphilweni esiyingqayizivele, ulwazi kanye namakhono. Le nhlanganisela ayikwazi eziphindiwe omunye umuntu.
Incithakalo isidleke umndeni
Ubushiqela yesigaba sabasebenzi wathinta Twardowski umndeni. Bakhandwa abaxosha, akazange nibhekane yokuthi impahla yalo mndeni iye wathola iminyaka eminingi yomsebenzi. Abazali labazalwane lalidingiselwe, ipulazi lashisa bakule ndawo. Kodwa Twardowski wayeyindoda kwengqondo okusheshayo futhi ube nombono obanzi. Waqaphela ukuthi iRussia uphokophele entsha, ukuthi isikhathi amapulazi amancane, umzamo umndeni elula lidlule. Asikwazi ukuthi yini wayecabanga, kodwa izinkondlo zakhe ukusekela collectivization, bona silangazelela ikusasa eliqhakazile edolobhaneni entsha. Ukuhlaziywa "Lonke iphuzu esivumelwaneni olulodwa" ebonisa ukuthi imbongi kokwakhe, engaziwa komunye umbono wokuphila.
Ukushicilela izinkondlo Twardowski waqala eneminyaka engu-15, neKubhala - kusukela zisencane, lapho namanje ayikwazanga izishise. Enkondlo "ibhapathizwa" kwaba imbongi Mikhail Isakovsky, ezimbili ithalente Russian ngempela wahlangana ephephandabeni "Umsebenzi Indlela." Iqoqo lokuqala olunyathelisiwe izinkondlo yanyatheliswa Tvardovsky e Smolensk ngo-1935. Senzeka ngaleso sikhathi imbongi iminyaka engu-25. Kusukela ngaleso sikhathi, futhi zonke imbongi azi- iyingxenye ebalulekile Russia, abantu Russian futhi zonke izenzakalo zenzeke ezweni. Konke kuyoba - kanye "Road House," futhi "Ukuze dalyu ibanga", futhi "Ngabulala ngaphansi Rzhev," kanye nezinye izinkondlo eziningi netinkondlo, kweso sikhumbuleke futhi baveze ngokunembile imicabango ejulile kakhulu indoda.
Ukuhlaziywa "Lonke iphuzu esivumelwaneni olulodwa" kuchaza ukuthi imbongi uyaziqaphela ngokwaso njengoba umdali esiyingqayizivele nge ilungelo izwi lakho siqu. Uyabuqonda, lapho eziningana endaweni yakhe, futhi le ndawo - nezakhe. Inkondlo yabhalwa ngo-1958, ngesikhathi ukuvuthwa siqu noMdali wawo.
Beka umuntu empilweni yakho
Ukuqonda indawo yabo emphakathini kuziwa umuntu ngamunye ngezikhathi ezingafani. Kodwa abantu ababaningi ukuqaphela ukuthi ukuphila inikezwa lokuzalwa. Uma umuntu uzalwa, uyaphila futhi ukwenza okuthile - ngakho-ke uthatha ukuphila cell, okuyinto ongowakhe. Akunakwenzeka ukuba senzeni umakhelwane umatasa noma umngane, ngoba ngamunye has izinto eziza kuqala ayo kanye namagugu.
abantu abaningi behlupheka iminyaka ngenxa yokuthi ukuphila kwakhe ezama ukufeza inkinga yomunye umuntu. Bangaphezi benokuthile abazali, abangane bomshado, abangane, kanye nezingane ngisho omdala. Ukuqonda ukuthi abantu ekuqaleni khulula - hhayi kuphela isinyathelo kodwa futhi umcabango - asiveli ngesikhathi esisodwa. Ithuba umathanda ekuqaleni ayibonwa yiwo wonke, kuba ngempela isipho ukudalelwa. Umbhali uchaza ukuthi imigqa ezimbili ezinkulu:
"Iqiniso lokuthi ngiyazi kangcono kunanoma ubani omunye emhlabeni,
Ngifuna ukusho. Futhi okuningi njengoba ngifuna. "
Aleksandr Tvardovsky, "Lonke iphuzu esivumelwaneni olulodwa": ukuhlaziya
Twardowski Ukudala kucacile futhi waqaphela, ngoba iqiniso. ivesi ukuhlaziywa Twardowski "Lonke iphuzu esivumelwaneni olulodwa" ebonisa ukuthi ngezinto ezinzima, futhi imizwa okusezingeni eliphezulu ungasho amazwi ilula futhi icacile. Ayikho bokubanga, artificiality, emhlanganweni, pretentiousness noma imihlobiso efanayo. Iqiniso ayidingi hlobo lokuzilungisa. Izwi ngamunye inamandla, kucace bese siveza okushiwo okwenzekayo. Abahlaziyi kanye abahlaziyi bemibhalo ziphele ton of iphepha, echaza okushiwo imbongi. Kodwa ukusho kanjalo ngokunembile, umane, ngamafuphi futhi ngokucacile njengoba, akekho omunye can. Ukusho kanjalo, kudingeka impilo yakhe, nakho yako ebuhlungu futhi enzima, ubuhlungu bakhe mayelana lenkaba, isimo sakhe sengqondo ngobuqotho ubheke okuhle kuleli zwe, futhi lokho kubi.
Aleksandr Tvardovsky njalo wathi lokho ayecabanga, naphezu emibi, ukunqotshwa umagazini "Izwe Elisha," ukuwa eside emseni. Ungavuli ekuqaleni wabhala Aleksandr Tvardovsky, "Lonke iphuzu esivumelwaneni olulodwa". Ukuhlaziywa kwe-izinkondlo ebonisa ukuthi imbongi uyaqonda kushuba ngezingozi umsebenzi wabo.
Ezinkondlweni zakhe Twardowski yenzisa sezifundo kweqiniso. Bonke abantu baphile, okubakhathazayo kanye ukukhathazeka, kukhona umsebenzi awenzayo. Twardowski - omunye walabo wokuqala owakhuluma mayelana ukubaluleka ngamunye ngenkathi ukwakhiwa nomphakathi wamaSoviet. Ngaleso sikhathi kwakukhona umbono ukubaluleka ngokuhlanganyela ngaphezu siqu. Uhlaziyo inkondlo "Lonke iphuzu esivumelwaneni olulodwa" kuhlanganisa zibona on ukubaluleka imbongi yena - njengoba imbongi kanye indoda. Bekanye ukuze wonke umuntu aqonde ukuthi "isivumelwano kuphela" - ukuze bahlale bethembekile kuze kube ngokwemvelo yabo, injongo yawo esemhlabeni. Iba nezingxoxo zezwi ayo - mhlawumbe iwumgomo oyinhloko ukuphila komuntu. Ngisho noma izwi wezwa kuphela umndeni - mhlawumbe ngaphandle ukuthi izwi umndeni kwakungeke athuthukile. Okufanayo emphakathini, neqembu, lo mbono. Ukuhlola nokwesekwa esikuthole, kumele wathi.
Umuntu uyazi indawo yakhe empilweni, ezolile futhi beqiniseka. Ukuhlaziywa Twardowski inkondlo "Zonke zingamalungu kwelinye itestamente olulodwa" kubonisa ukuthi inkulumo ethi kwale ncazelo ibangelwa inqubo vesi ekhethekile - indandatho ngamazwi. Ukuphinda isabizwana futhi esho izwi elifanayo kwenza ukuthi umuntu bangasephula, ukuthembeka nokungaguquguquki wathi.
Ukufunda inkondlo, ungaziqhenya isimo sengqondo imbongi, ukuqonda iqiniso layo bese uthinta yezwe ukuba ithalente omkhulu isegazini.
Ukuhlakanipha - yikhono ngokuqonda ukubiza ngehalavu ngehalavu. Ukuhlaziywa kwaleli vesi, "Lonke iphuzu esivumelwaneni olulodwa" ebonisa ukuthi imbongi akuyona alien okuhlangenwe nakho elula ezikhungethe ngamunye wethu. "Ngingowesithandwa ne ukuphila ophithizelayo" - ngakho ungakwazi ukutshela wonke umuntu, abazi finiteness endleleni emhlabeni. Ukuhlakanipha - iyona ukwamukela ukuphila ezifana ngayo, ngayo yonke ube nezikhathi ezinzima nezimnandi, ikhono ukujabulela ukuphila kuwo wonke amagumbi yayo.
S. Dovlatov, "Ukuhlehla": Isifinyezo - funny ngidabukile, esidabukisayo futhi iwubuphukuphuku
Kungani isidingo ukuhlaziya ABC XYZ
"Auliya 'izinwele umbala: imibala ehlukahlukene Iphalethi
Ihhotela kleopatra Sahara Ihhotela 3 * (Alanya, Turkey): incazelo, ezokungcebeleka kanye nokubuyekeza
Thermowashers ngoba kokungathembeki polycarbonate. Indlela yokulungisa? imfundo
Uhlelo lweWestphalian. Ukuwa kwe-Westphalian uhlelo nokuvela kwe-oda elisha lomhlaba
Carabiners "Wild Boar": izinzuzo izikhali